March 5, 2018 – PuraKhabar
भारतका सबैभन्दा धनी उद्योपति मुकेश अम्बानीको जठो छोराको बिहे हुने भएको छ। को हुन त उनकी बुहारी ? भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्लोका मेहता मुकेशकी बुहारी बन्ने भएकी छिन्। श्लोका हिरा व्यापारी रसेल मेहताकी कान्छी छोरी हुन्। आगामी डिसेम्बरमा उनीहरुको बिहे हुने बताइएको छ। अम्बानी र मेहता परिवार एक आकाश र श्लोकाले धीरुभाई अम्बानी इन्टरनेशनल स्कुलमा सँगै पढ्थे। श्लोकाले एन्थ्रोपोलोजीमा मास्टर डिग्री पास गरेकी छिन्।
पोखरा – संसदको महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समितिको विषयमा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नगरि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७४ संसद बैठकमा पेश भएको छ। प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिईने व्यवस्था सहितको मस्यौदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बुझाएतापनि उक्त समितिले भने सार्वजनिक लेखा समितिको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था नगरी संसदमा पेश गर्न सुझाव दिएको हो। आइतबार साँझसम्म र सोमबार दिउँसो बसेको परामर्श समितिको बैठकले अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र संघीय संसदमा समेत यो विषयमा नियमावलीमा सैद्धान्तिक व्यवस्था नगरेको सुझाव दिँदै समितिले दिएको मस्यौदाबाट ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने’ व्यवस्था भएको बुँदा हटाउन…
धरहराको जमिन मिचेर व्यवसायिक भवन बनाउन लागिएको भन्दै बिरोध
भूकम्पले अस्तित्व नै नामेट बनाएको धरहरा बन्ने अत्तोपत्तो नभएपनि धरहरा अघि व्यवसायिक भवन बन्दै, गुठीको जग्गामा भवन बनाउन नदिन आग्रह काठमाडौं । भूकम्पले ऐतिहासिक धरोहर धरहराको अस्तित्व नामेट बनायो । भूकम्पपछि फेरी धराहरा बनाउँने योजना बन्यो । तर, धराहरा कहिले बन्ने हो थाहा छैन । धरहरा बन्ने निश्चित त छैन बरु धरहरा अगाडिको जमिनमा व्यवसायीक भवन भने बन्न लागेको छ । तर, त्यो पनि कुनै गुठिको जमिनमा । भूकम्पमा धरहरा ढलेको तीन वर्ष बित्नै लाग्यो । यो बीचमा धरहरा बनाउने अनेक हल्ला सुनिए । तर, धरहरा कहिले बन्ने अझै थाहा…
के सर्छ त प्रदेश ५ को राजधानी ?
बुटवल । प्रदेश ५ को राजधानी सार्न चलखेल शुरु भएको छ । यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको बुटवलबाट अन्यत्र राजधानी सार्न असुविधा र भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखाउन थालिएको छ । २ तिहाई नपुग्ने भएपनि असुविधा र भौतिक पूर्वाधार अभावको कारण देखाएर सांसद्हरुलाई सहमत गराउने प्रयास थालिएको कांग्रेसका एक सांसद्ले बताए । ‘हामीहरुलाई अनौपचारिक रुपमा राजधानी दाङ सार्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आउन थालेको छ–उनले भने–बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले असहयोग ग¥यो, यहाँका संघसंस्थाले असहयोग गरे, पूर्वाधार अभाव भयो भन्ने बहाना देखाएर दाङ सार्न लविङ हुन थालेको हो ।’ यो लविङका…
ओली मोदीको बाटोमा हिड्दै l निशानामा भ्रष्ट कर्मचारीहरु, विवरण संकलन गरिंदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुप भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन लिन शुरु गरेको छ ।गोप्यरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गर्न कार्य अघि बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ओलीले सुशासन र समृद्धिको आभाष दिलाउने हेतु मन्त्रीको छनोटमा समेत विशेष सावधानी अपनाएका छन् । सरकार सफल हुनुमा भ्रष्टाचार नै बाधक देखेपछि ओलीले आफ्ना मातहतका तीन मन्त्रीहरु अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिएका छन्…
काठमाडौं। काँग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा अपेक्षित भन्दा बढी मत परेपछि थपिएको मतको बारेमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। काँग्रेसका सांसदहरु कुल ६३ सांसदहरु मध्ये देउवा पक्षका ३९ जना रहेपनि देउवालाई त्यो भन्दा पाँच मत बढी आएपछि थपिएका पाँच मतका बारेमा अनेक अड्कलबाजी भएका हुन्। सोमबार सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाले ४४ मत ल्याउदा उहाँका प्रतिश्पर्धी प्रकाशमान सिंहको १९ मत मात्रै आएको छ। सिंहलाई २४ मत आउनु पर्ने अनुमान गरिएपनि महामन्त्री शशांक कोईराला पक्षीय नेताहरुले नै देउवाको पक्षमा मतदान गरेकाले सिंहको मतसंख्या घटेको हो। सिंह र कोईराला…
काठमाडौं । २५ फागुनबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘गाँजा बाजा’को टिम यतीबेला मोफसल दौडमा छ । यो चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा पोखराबाट यसको प्रचार प्रसार सुरु गरिएको हो । चलचित्रका निर्देशक गणेशदेव पाण्डे, अभिनेता अमर सुवेदी, रबिन थापा लगायत अहिले मोफसलमा छन् । शनिबार पोखरा र आईतबार बुटबल, नारायणघाट र हेटौंडामा यो चलचित्रको पत्रकार भेटघाट गरियो । भेटघाटका क्रममा निर्देशक गणेश देब पाण्डेले यो पारिवारिक र हास्य प्रधान चलचित्र भएको बताएका छन् । चलचित्रको ट्रेलरमा बिप गरिएको बारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा निर्देशक पाण्डेले सिनेमामा त्यस्ता कुराहरु नरहेको बताएका छन्…
काठमाडौं । आइसीसी विश्वकप छनोट क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपालले अहिले आयोजक तथा टेष्ट राष्ट्र जिम्बाबेसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । बुलावायोस्थित क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ्ग गरिरहेको जिम्बाबेले तेस्रो विकेट गुमाएको छ । बसन्त रेग्मीले नेपाललाई तेस्रो सफलता दिलाएका छन् । बसन्तले ओपनर सोलोमन मिरेलाई ५२ रनमा आउट गराए । यसअघि बसन्तले नै ह्यामिल्टन मसकाज्डालाई १७ रनमा पेभेलियन फर्काएका थिए । तेस्रो विकेट गुमाएसंगै जिम्बाबेले १५ ओभरको समाप्तिमा ३ विकेट गुमाएर ११३ रन बनाएकोछ । यसअघि नेपालका सन्दिप लामिछानेले जिम्बाबेका ओपनर सिपास झुवाओलाई ४१ रनमा आउट गराएका थिए…
अर्थमन्त्रीले गरे १५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने घोषणा l आब युवा बिदेशिन नपर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष पाँच लाख र दोस्रो वर्ष १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घाषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने पनि बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीयोेग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । बधाइ एवं शुभकामना दिन अर्थ मन्त्रालय पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग उनले यस्तो बताएका हुन् । महासंघको टोलीले लगानीयोग्य तरलता अभावबारे तत्काल निर्णय लिन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । खतिवडाले लगानीयोग्य पुँजी अभावबारे आफू पूर्ण…
काँग्रेस संसदीय दलको नेताको चुनाव आज, देउवालाई प्रकाशमान सिंहको चुनौती
काठमाडौं, २१ फागुन ।कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार अपराह्न ६ देखि ७ बजेसम्म देउवा र सिंहले मात्र दलको नेतामा नाम दर्ता गराएका हुन्। सोमबार १० देखि १ बजेसम्म मतदान हुने र मतदान सकिएलगत्तै मतगणना गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। देउवाले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि वारेसनामा दिएका थिए। उनको उम्मेदवारीको प्रस्तावक विजयकुमार गच्छदार र समर्थक मानबहादुर विश्वकर्मा छन्। छोरा जयवीरसिंह देउवाको व्रतबन्धमा दिनभर व्यस्त रहेकाले देउवाले वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएका हुन्।…